Ogaden News Agency (ONA) – Cabdullahi xuseen iyo Martin Schibbye oo Aragtida European Union’ka ee ku aadan Ethiopia wax ka badalay
Cabdullahi xuseen iyo Martin Schibbye oo Aragtida European Union’ka ee ku aadan Ethiopia wax ka badalay
Guriga Baarlamaanka Midowga Europe waxaa ka dhacay shir caalamiya oo looga hadlay Qadiyada Somalida Ogadeniya iyo Ethiopia. Shirkan waxaa soo qaban qaabiyay Xisbiga Sooshaalistiga iyo Dimoqraadiga Baarlamaanka Yurub (Socialist and Democrats in European Parliament), waxaa kale oo qaban qaabada shirkan ka qeyb qaatay Ururka u dooda xuquuqda wariyaasha caalamka ee loo yaqaano (Commitee to Protect Journalists CPJ).
Shirkan waxaa kasooqeyb galay Suxufiga kasoo jeeda wadanka Sweden Martin Schibbye iyo Cabdullaahi Xuseen oo labadooduba si wada jira isula daadihinayay warbixin ay wadajir kugudbiyeen. Cabdullaahi Xuseen waxa uu ka hadlay Qadiyada Ogadeniya isaga oo soo bandhigay Filimaan uu kasoo sameeyay dhulka Ogadeniya, Martin Schibbye waxa uu isna ka hadlay waxii uu ku arkay dhulka Ogadeniya halistii noloshiisu gashay markii lagu qabtay Gudaha Ogadeniya.
Martin Schibye oo Ilays TV siiyay wareysi ayaa sheegay innuu socdaalkiisan uu ku saleysanyahay balan qaad uu u sameeyay shacabka Ogadeniya innuu caalamka gaadhsiiyo dhibaatada heysata shacabka Ogadeniya, sidoo kale waxaan balan qaad u sameeyyay xabsigii Qaaliti maxbuusiinti aan kuwada jirnay in aan qadiyadooda gaadhsiiyo caalamka. Isaga oo hadalkiisa siiwata waxa uu yiri aad iyo aad waxaan ugu khusuucsanahay inaan maanta Cabdullaahi Xuseen iyo anigu kawada qeyb qaadano oo la hadalno Baarlamaanka Europe. Cabdullaahi xuseen haduusan filimaanta uu kasoo diyaariyay Ogadeniya ee kamidka yihiin qaabkiii lanoo qabtay iyo waxii lanagu sameeyay iyo dhibaatada lagu hayo shacabka Ogadeniya. Hedde maanta waxaan ka sheegi lahaa guriga baarlamaanka Europe ma jireen, hadal kasta oo aan sheego waxa uun noqon lahaa hadal nin yiri oo cadeyn heysan, Ethiopiana si dhib yar ayay iyana u dafairi laheyd. Laakiin maanta waxa aan hordhigayno Guriga Baarlamaanka Europe waa cadeyn aan laga doodi karin oo i tus oo itaabsii ah. Dadka iyo dhulka Ogadeniya waa in loo gurmado, Maxaabiista Qaaliti ku jirtana waa in laga sii daayo, shaqadaas ayaa u taala European Unionka cadeyn baanan hor dhigayna.
Cabdullaahi Xuseen iyo Martin Schibye waxay badaleen aragtidii baarlamaanka Europe ee ku aadana wadanka Ethiopia. Muuqalada ay soo saareen waxaa kamid ahaa dhaawacyadii halista ahaa ee lagaadhsiiyay Labada wariye ee ree Sweden, muuqaladaas oo ahaa kuwa argagax leh, horeyna aysan dadku arkin. Filimaan ka hadlaya qaabka loo xasuuqo shacabka Ogadeniya iyo muuqalo muujinaya xabsiyada Ethiopia.
Masuul kamid ah Baarlamaanka Europe ayaa sheegtay in talaabo dag dag ah loo baahanyahay in laga qaado Dowlada Ethiopia. Talabadaas waxay noqon kartaa ayay tiri Cunaqabatayn lasaaro taliksa Ethiopia, waa in aan xoojinaa maclumaadka aan ka helayno gudaha Ethiopia, sida warbixinta Cabdullaahi oo kale iyo kuwa lamidka ah waa in aan dadaal dheeri ah sameyno sidii lagu heli lahaa cadeymahaas oo kale.
Gudomiye kuxigeenka Ururka Human Rights Watch u jooga Qaarada Afrika ayaa shirkan ka sheegtay in taliska Ethiopia jaajuso dadkiisa oo isgaadhsiinta laga dhageysto. Wadankani waa wadan aad u cabsanaya oo kalsooni ku qabin shacabkiisa. Waqtigan aan joogno isgaadhsiinta Ethiopia mid horumaray maahan hada uunbuuna bilow yahay oo wajigi kowaad ayay marayaan. dadka isticmaalana aad ayuu u yaryahay isgaadhsiintaas marka laga tago Addis Ababa wadanka intiisa kale waxay warka ka helaan Idaacadaha, Dowlada Ethiopia waxay jaam gareysay idaacadahaas midaas oo dadkii ka dhigtay wax aan xogta wadanka iyo mida caalamka la socon. waxa aynu ognahay in wadanka Ethiopia yahay wadanka labaad ee ugu tiro badan Africa, waxa aynu isla qireyna in Ethiopia horumar u baahantahay isgaadhsiinta sida telefanada, Internetka iyo waxa lamdika ahi waxaan ognahay in horumar yahay balse maanta Ethiopia horumarkaas yar ee dadka tirada yari isticmaalaan waxaa loo adeegsada si qaldan oo xadgudub ku ah xuquuqda aadamaha. Hadey sidan ku sii socoto xitaa 10 sano kadib hadii isgaadhsiinta Ethiopia horumarto oo dad badan awood u helaan inay isticmaalaan Dadaka Ethiopia waxay ahaanayaan dad cabsi ku nool oo ka faa ideysan karin technologiyada horumarkeeda.
Shirkan ayaa dhinac kasta looga dhaleeceeyay Ethiopia haday tahay Xad gudubka xuquuqda Saxaafada, Dilka, Dhaca boobka, iyo hadey tahay dhinaca horumarka intaba.
Anna Gomes ayaa sheegtay in Ethiopia kadim tahay wadamada deeqda ugu badan ee bani aadanimo iyo mida horumarineedba la siiyo. Sidaas ooy tahay waxay deeqahaas u isticmaalan si qaldan oo musuq maasuqa. Haayadaha Dowliga ahee ree galbeedka iyo Safaraadahooda ku yaala Addis Ababa intuba indhahay ka xidheen deeqdaas la lunsaday arrimaha siyaasadeedna loo adeegsanayo. Arimahan oo dhan waxay kasoo horjeedaan qaanuunka EU u yaala ee deeq bixinta, sidaas awgeed hadii aan nahay xubnihii Baarlamaanka Europe waa inaan shaqadeena qabsanaa oo aan si fiican u gudano arrintan sidii xal ugu heli laheyn dag dag ah aan u sameyno. Warbixinta Martin iyo Cabdullaahi iyo xubnihii kale ee hadlayba waxay indhaha u furaysa Eropean Uninionka.
Shirkan oo doodo iyo su’aalo la waydiiyay xubnaha Baarlamaanka Europe waxa kala gudboon iyo sidii halkan looga sii amba qaadi lahaa, jawaabo wax ku ool ahna laga bixiyay ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyay jawi aad u heersareeya oo Qadiyada Ogadeniya waa hor leh oo cusub u furaya.